अर्घाखाँचीमा लोप हुन लागेका सामग्रीको संरक्षण गर्न संग्रहालय - News from Nepal
मङ्ल, मंसिर २४, २०७६
अर्घाखाँची : सन्धिखर्क नगरपालिकास्थित बाङ्गगलामा पुराना पुस्ताले प्रयोग गरेका सामाग्रीको संग्रहालय स्थापना गरिएको छ ।
संग्रहालयमा लोप हुने अवस्थामा रहेका पुराना सामग्रीहरुको संरक्षण गरिने छ । अर्घाखाँचीका पत्रकार निमबहादुर रिजालको सक्रियतामा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका –४ वाङ्गलामा बैकुण्ठपुरी संग्रहालय स्थापना भएको छ ।
जहाँ जिजु–बाजेले प्रयोग गरेका तर अहिलेका पुस्ताले नदेखेका पुराना सामाग्रीहरु राखिएको छ । जसमध्ये कपडा राख्ने काठको मदुस, घ्यु राख्ने हर्पे, तेल राख्ने चौठी, मोही पार्ने काठको ठेको, मदानी, दही जमाउने काठको आरी, ओखल, ढिकी, काठको चम्चा, जाँतोलगायतका दर्जनौँ वस्तुहरु राखिएको छ ।
यस्ता सामाग्रीको संरक्षणमा लागेको संरक्षक निमबहादुर रिजालको भनाइ छ । संग्रहालयमा पानी आउँदा ओड्ने सेउ, धर्मशालामा राखिएको आरी, डाला, तमाखु खादा प्रयोग गरीने हुक्का बाँसको काइँयो पुराना टेप, रेडियोे, भजनमा गाउन प्रयोग गरिने खैजडीलगायतका सामाग्री राखिएको छ ।
संग्रहालयका लागि प्रदेश नम्बर ५ सरकारले ४ लाख ४२ हजार आर्थिक सयोग गरेको थियो । अहिले संग्रहालयमा दैनिक १०० जनाको हाराहारीमा मानिसहरु अवलोकनका लागि आउने गरेका छन् ।
पुराना र लोप हुने अवस्थाका सामाग्री देख्दा अनौँठो र विगतको सम्झना हुने गरेको स्थानीय युवा लक्ष्मण खड्का बताउँछन् ।
पहिले पहिले प्रयोग गरेका सामग्रीहरुलाई संरक्षण गरिएकाले यसलाई धेरैले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।
गाउँघरमा कतै कतै भेटिने यस्ता सामाग्री पुर्खाले आफ्ने सीप र ज्ञानबाट बनाएका बैकुण्ठपुरी संग्रहालय संरक्षणका लागि सरकारले पनि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ग्रेटवालको झल्को दिने गरी बन्दीपुरमा पदमार्ग पर्खाल निर्माण
क्रसर उद्योग अनुगमन गर्न समिति गठन
अनैतिक कार्यमा संलग्न चार जोडी पक्राउ
माटोको खानीमा पुरिएर सासु-बुहारीको मृत्यु
गायिका राउतलाई चार दिन हिरासतमै राख्न प्रहरीलाई अनुमति
राष्ट्रिय भलिबल टोलीका कप्तान अरुणा शाही सम्मानित
गाडी आयातमा कमी आएपछि राजस्व संकलन प्रभावित
हिउँले ढाकेको त्याे पश्चिम बागलुङ र मेरो घुम्ने इच्छा (फोटो फिचर)
बागलुङमा चौध किलोको भाले !
सिवाईसी र दिदीबहिनी साकोस बिच एकीकरणका लागि सहमति
हुनेवाला बेहुलीलाई ४ दिनअघि टिप्परले किचेपछि प्रेमीले लेखे– नभुलेस् बूढी, म नि छिट्टै आउँछु !
हस्तमैथुनले शरीरलाई कुनै बेफाइदा गर्छ ?